भर्खरै कल्पना दाहाल रुदै पहिलो पटक! माफी नमागे दोहोरी च्याम्पियनका जर्जको नाममा आयो, Dohori Champion. – Dainik Samchar
भर्खरै कल्पना दाहाल रुदै पहिलो पटक! माफी नमागे दोहोरी च्याम्पियनका जर्जको नाममा आयो, Dohori Champion.
March 19, 2021 281
नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ शुरु हुनेबित्तिकै विवादमा आएको छ । यसका निर्णायकहरुले कलाकारको बेइजत गरेपछि यो बिवादमा आएको हो । निर्णायक रहेका चन्द्र शर्माको सबैभन्दा बढि आलोचना भएको छ ।
चन्द्र शर्माले चर्चित लोक दोहारी गायिका कल्पना दाहाललाई भाइरल साइरल वाली भन्दै बेइ जत गरेका थिए । उनले स्टेजमा भएकी कल्पनालाई नराम्रा शब्दहरु प्रयोग गरेर बेइजत गरेका थिए । चन्द्रको यो कामको सबैले आलोचना गरेका छन।
एजेन्सी – चीनका एक दम्पतिले आफ्नो छोरालाई ‘स्टे’रोइड क्री’म’ लगाइदिएका थिए। उक्त क्री’मले उनीहरुको छोरालाई यस्तो असर गर्योकि उ क्रमश मोटो हुँदै गयो। छोरा बेलुन जस्तै फुलेको देखेर उक्त दम्पति आ’त्तियो। तर, के कारणले ह्वात्तै मो’टायो भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाउन भने सकेनन्।
केहि महिना सम्म उनीहरुले छोरालाई क्री’म लगाउने कार्यलाई निरन्तरता नै दिए । छोरा दिनप्रतिदिन बेलुन जस्तै फु’ल्दै गएपछि उनीहरु अस्पताल पनि गए । त्यहाँ डाक्टरहरुले विभिन्न जाँच गर्दा पनि उनीहरुको छोरा किन बेलुन जस्तै फु’लिरहेछ थाहा हुन सकेन ।
बालकलाई आमाको दुध बाहेक अन्य केहि अनि खु’वाउने गरिएको थिएन। उनीहरुले बालककी आमाको दुधमा केहि तत्व छ कि भनेर जाँच समेत गरे। तर, कुनै पनि तथ्य पत्ता लाग्न सकेन। समय बित्दै जाँदा उनीहरुको छोराको अनुहारमा कपाल पनि पलाउन थाल्यो।
अवस्था थप बि’ग्रिएपछि स्थानीय अस्पतालले बालकलाई अर्को ठूलो अस्पतालमा रे’फर गर्यो। रे’फर गरिएको अस्पतालमा त्यस किसिममा समस्या बोकेर अन्य व्यक्तिहरु पनि आइसकेका थिए। अस्पतालका डाक्टरहरुले स’मस्या के हो भनेर सम्झाए उक्त दम्पति च’कित नै पर्यो।
डाक्टरहरुका अनुसार उक्त बालकमा ‘स्टे’रोइ’ड क्री’म’ले असर देखाएको थियो। बालकमा प्रयोग गरिएको ‘यु’फुलि’न म’ल्टि-इ’भे’शे’न्ट स्पेशल ए’न्टिब्या’क्टेरि’यल क्री’म’ले अन्त्य बालकहरुमा पनि त्यसप्रकारकै असर देखाएको डा’क्टरहरुको दा’वी छ ।
उक्त क्रिममा प्रयोग भएको एक र’सायनलाई लामो समय सम्म प्रयोग गर्दा विभिन्न स’मस्याहरु देखा पर्ने स्थानीय डाक्टरहरु बताउँछन्। उक्त क्री’मको प्रयोग ब’न्द गरे लगतै बेलुन जस्तै फुलेका बाल-बालिका क्रमश स’मस्यामु’क्त हुँदै गएको स्थानीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
Prevअमेरिकामा फेरि अर्का नेपाली चालकमाथि यात्रुद्वारा आक्रमण ! (भिडियोसहित)
Nextदुःखद खबर; ललितपुरमा आ’गला’गी, एक जनाको मृ’त्यु !
स्वर्गीय कन्चनका साथिहरु १३ दिनको तिथिमा पुगे घर,अनिशाले गर्दा आफ्नो बेइज्जत भएको गुनासो ( भिडियो हेर्नुस् )
BREAKING: आज एकैदिन कोरोनाबाट ४ जनाको नि’धन , थपिए यति धेरै संक्रमित
फेरि एक्कासी घट्यो कुखुरा को मासुको मूल्य : हेर्नुहोस् कति पुग्यो !